Macalinka Liverpool Klopp Oo Leeylin Doono Reds Kulankiisii 300aad Waayihisa Ciyaared Ee Kooxda Liverpool.
Home Horyaalka Ingiriiska macalinka Liverpool Klopp oo Leeylin doono Reds kulankiisii 300aad waayihisa ciyaared...
Jurgen Klopp ayaa la wareegi doona kulankiisii 300aad ee Liverpool markii kooxda heysata horyaalnimada Premier League ay booqan doonto garoonka king power stadium galabta.
Macalinka Jarmalka ayaa maalmo sharaf leh dib ugu soo celisay Anfield tan iyo markii ay bedeleen Brendan Rodgers sanadkii 2015, iyagoo ku guuleystay Champions League 2018-19 ka hor inta aysan soo gabagabeynin 30 sano oo sugitaan ah xilli ciyaareedkii hore.
Si kastaba ha noqotee, dhibaatooyinka dhaawaca ayaa gacan ka gaystay qaab dhismeedka xilli ciyaareedkan waxayna ku raad joogaan Manchester City 10 dhibcood ka sareys taasoo ka dhigeysa Klopp inuu ku jiro xaalad dabaaldeg ah oo aan ka badneyn inuu ka horreeyo sumcadiisa.
“Marka ugu horeysa ma dareemayo sida waxaan u dhawaanayaa kulankeygii 300aad waqtigan, waan kuu sheegi karaa,” ayuu yiri ka hor kulanka uu la yeeshay kooxda Rodgers isbuucaan.
Runtii muhiim ma ahan Waa wax markii aanan halkan joogin aan ka fikiri doono waqtiga aan halkaan joogay Waan ogahay in shaqadaydu wali tahay mid jirta iyo mustaqbal, oo aan ahayn wixii la soo dhaafay. Lambarka ciyaarta 300 aad ayuu muhiim iigu yahay, iyo cayaaraha mid ilaa 299 ma ahan wax yar xilligan.
Waan ognahay inaanan gebi ahaanba wax fahmi karin ama wax kasta, laakiin waxaan ognahay inay tahay inaan mustaqbalka guuleysanno taasina waa tan aan isku dayno Ma helo qaylada natiijada laakiin waan ogahay waxa xaalku yahay waxaanan ka hadlayaa natiijooyinka guud ahaan.
“In kasta oo aan ogahay sababta aynaan u duuleynin, waxaan filayaa inaan ku guuleysan karno ciyaaro badan oo kubada cagta ah sidii aan daacad u ahaan lahayn, taasina waa waxa aan ka walaacsanahay In kasta oo difaaca Reds laga yaabo inuu ku burburayo cadaadis aad u sareeya oo ka imanaya City, rikoorka Klopp ayaa weli ka dhigaya akhrin cajiib ah.
299 kulan oo uu ciyaaray ilaa maanta, 53 jirka ayaa badiyay 177, iyadoo kaliya Kenny Dalglish (185) uu sheegtey guulo badan isla marxaladii uu xukunka hayey.
Boqolkiiba guushiisa ayaa taagan rikoor 59.2 ah, taasoo ka dhigeysa inuu ka sarreeyo Bill Shankly (51.9) iyo Bob Paisley (57.4), iyadoo Liverpool ay dhalisay 614 gool intii uu macalin u ahaa oo laga dhaliyay 308.
Klopp wuxuu u baahan doonaa inuu ku dhejiyo Merseyside in muddo ah haddii uu doonayo inuu kor u qaado tirada ugu badan ee guulaha, iyadoo Shankly uu 415 jeer ka badiyay 799 kulan oo uu ciyaaray.
Muhiimadiisa ugu sareysa ayaa hadafkeedu yahay inuu ka jawaabo dib u dhaca ku yimid guuldaradii isku xigxiga ee soo gaartay markii ugu horeysay ee uu ka soo hooyay Brighton iyo Hove Albion ka hor inta uusan ka badinin qaab ciyaareedkii hore ee Pep Guardiola.
Ninka ugu dambeeya ee kormeeraya seddex guuldaro oo ka soo gaartay Liverpool ayaa ahaa macalinka Foxes Rodgers, iyadoo ninka ka horeeyey Klopp uu boqolkiiba 50 ku guuleystay kooxda.
Taariikhda ayaa culeys weyn saaraysa Rodgers oo murugada ku haya Klopp, iyadoo tababarayaasha horey u soo qabtay Liverpool ay guuldarro ka soo gaartay 12kii kulan ee ugu dambeysay Premier League ee ay la ciyaareen Reds wadar ahaan 39-8.
Tababarihii ugu dambeeyay ee Liverpool ee ka horyimaada Premier League wuxuu ahaa Roy Hodgson iyadoo West Brom ay aheyd 2012.
Previous articleMan City daafaceeda Angelino oo raba inuu si rasmi ah uga mid noqdo kooxda Leipzig heshiis joogto ah
Next articleMaxaa Kala Socotaa 25-ka Xidig oo da’yar ee Goolasha ugu badan ku lug yeeshay